Top 5 Online screen taariikhqorihii 2015
Si aad u hubiso in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah fadhiyada duubo shaashadda tahay rikoorrada screen online heli dareenka ugu fiican oo user xaqa u leeyahay in ay soo booqdaan website-ka si ay u hubiyaan in shaqada lagu sameeyey tayada iyo fasalka. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada duubo shaashadda online yihiin oo lacag la'aan ah iyo sidoo kale ay wax ku ool u yihiin marka la barbar dhigo kuwa la heli karo in ka badan ad internetka u baahan download iyo rakibaadda iyo in la hubiyo in waddada ugu xaragada la ansaxiyey in arrintan la xiriira user ka dhigi waa in la hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka s la doortay si ay u helaan shaqo lagu sameeyey qaab iyo fasalka oo ay sidoo kale ka dhigi lahaa hubiyo in user helo xalka ugu wanaagsan sida fiican u ah si loo hubiyo in kuwa kalena sidoo kale fahmi karaan .
Qeybta 1: Faa'iidooyinka rikoorrada screen online
Qeybta 2: Top 5 Online screen taariikhqorihii 2015
Si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka la riyaaqay waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijyada online waxaa loo isticmaalaa ka dib markii faa'iidooyinka:
1. Waxaa jira rakibo lahayn ku lug iyo inta badan barnaamijyada loo isticmaalo arrintan la xiriira sidoo kale waa fududahay in la isticmaalo, sidaas darteed user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay dhigi aan gashanno hubka load nidaam kasta oo ay hubiyo in muuqaalada ugu wanaagsan waxaa ku riyaaqay online.
2. rikoorrada screen online sidoo kale in la hubiyo in ay dhufto ee warbaahinta bulshada oo waaweyn ayaa sidoo kale gundhig dhexdeeda oo ay sidoo kale ay awoodaan si ay u helaan ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay tayada marka ay timaaddo in la wadaago ee kabka shaashadda. The duubo la shubay screen waa inta badan la xiriira in YouTube iyo sidaas daraaddeed madal waxaa lagu qabtay ayaa sidoo kale si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo videos yihiin share in this site ugu soo booqday caalamka.
Waa 3. rikoorrada Kuwani u fududahay in la isticmaalo sida inta badan isticmaala ka hor lagu qeexay goobaha on rikoorrada kuwaas oo hubiyo in shaqada la dhameeyo iyo user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in goobaha ay la beddelo sida looga baahan yahay in ay wadajir u hesho natiijooyinka ugu fiican.
4. rikoorrada ayaa screen in la heli karaa online waa kuwa in yihiin kuwa ugu fiican oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user sidoo kale hubin karaa in in kuwan waxaa lagu heli meel kasta oo adduunka ah sida marka la barbar dhigo kuwa ku rakiban yihiin gal mashiinka si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan oo arrinta lagu duubo shaashadda laga xalinayo fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha.
5. Si ka duwan qoraalkii rakiban rikoorrada screen online ka mid ah in had iyo jeer la iman qeexitaanka sare iyo xallinta yihiin. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in buuga ka mid ah rikoorrada online la akhriyo si fiican oo wanaagsan ayaa laga soo saaray waayo-aragnimo ah in user helo ka duubay online iyo in la wadaago.
Ka dib waxaa ku qoran liis ah in user ah waa in ay tixgeliyaan doortay shaashadda taariikhqorihii ugu fiican online iyo sifooyinka guud ayaa sidoo kale ay tahay in la tixgeliyo.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in natiijadu tahay mid tayo sare iyo heerka ku qanacsan user ayaa waxaa sidoo kale la kulmay arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in goobaha la sanyihiin gudahood barnaamijka waxaa lagu hayaa sida ay tahay in la hubiyo in lagu qoro waxaa loo sameeyaa si guul leh.
2. Ku Baaqay Cam
Waa barnaamij kaliya ee liiska u ogolaanaya user ay si buuxda u Customize video ah oo uu soo duubay iyo sabab la mid ah waxa ay sidoo kale waxaa loo arkaa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka in la yihiin sidii ugu fiican ee. User waa in akhri tilmaamaha ayaad jeceshahay in ay hesho ugu wanaagsan ee reer barnaamijka sida ay u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo daaha duubo online waa heshiis weyn ma at dhan ka dhigi doonaa. Waxa kale oo hubin doona in user helo in la ogaado oo dhan sifooyinka la gundhig gudahood.
Waxaa shaashadda oo taariikhqorihii ahaa online la interface soo jiidasho iyo ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. The qaybsiga shaqeynta gundhig waa mid ka mid ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. Barnaamijku waa gobol ka mid ah tahay oo waa la heli karaa si ay u daboolaan baahida user ee fudayd iyo qanacsanaanta.
4. Apower jilicsan
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada taas oo maydhan biyaha fududahay in la isticmaalo iyo user marnaba ka heli doontaa wax kasta oo arrinta iyo dhibaato marka aad isticmaalayso sifooyinka barnaamijka. Waxaa sidoo kale in la xuso in shaqada la qaadi karo waa sidoo kale waxaa si aad u hubiso in user ka bixi kartaa oo ku xidh oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Fikradda guud ee barnaamijka waa in la hubiyo in gaadiidka dheeraad ah weeciyay dhinaca taariikhqorihii adigoo bixinaya adeegyada ugu fiican ee isticmaala
Barnaamijkan ayaa la sameeyey si loo hubiyo in user helo qaababka ugu wanaagsan oo lagu qoro waxaa loo sameeyaa hab ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in version Java ugu dambeeyay waxaa ku jira rakibay gal drive ay adag tahay in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay fudayd iyo qanceen.
Best rikoorrada Screen
Sida loo soo dejinta FLV in Adobe jilitaankii u Faalladaada
> Resource > Video > Top 5 Online screen taariikhqorihii 2015